Ubuye ancome umanduleli wakhe njengasekunene kweNgilane, uAlex Scott, ecaleni kokufudukela eLyon, njengesitshixo sokufikelela kwinqanaba lokuphumelela amabhaso angaqhelananga nalo. “Ngumntu endaye ndalwa nzima naye ukufumana indawo yam kwiqela, elandinyanzela ukuba ndibengumdlali ongcono, utshilo, esusa ujoliso kuye. ” Andizami ukuphumelela. amabhaso obuqu,
UPhil Neville uthe ukungaphumeleli kwasibetha isigwebo sakhe emva komdlalo owandulela owamagqibela kankqoyi weNdebe yeHlabathi ye-England nxamnye ne-USA kwaye uyazisola ngokubiza indawo yesibini kumdlalo wokudlala “umdlalo wobudenge”. Ngosuku olwandulela Umdlalo wangoLwesine wobuhlobo neBelgium, umphathi uthe: “Bendifuna ukuphumelela kakubi. Ndicinga ukuba oko
UNuno Espírito Santo uzokonwaba kuno-Unai Emery ngokuzoba, kubadlali beArsenal abakwiqela A kubandakanya u-Eintracht Frankfurt no-Standard Liège, ngelixa iManchester United ijongene nohambo olunyanzelisa ukuya ePartizan Belgrade nase-Astana yaseKazakhstan. I-Eintracht ifikelele kumdlalo owandulela owamanqam we-Europa League kwisizini ephelileyo, yaphulukana neChelsea, nangona sele
Umbutho weBhola ekhatywayo usungule uphando kwiingxelo zokumemelela ngobuhlanga ngexesha leMillwall ephumelele iNdebe ye-FA kumjikelo wesine e-Everton, iklabhu ithembisa ukunyanzelisa ixesha lokuphila nxamnye nabaphi na abaxhasi abafunyenwe benetyala. Ividiyo ethunyelwe kwimithombo yeendaba zentlalo ibonakala ibonisa abalandeli basekhaya besebenzisa amagama ahlaselayo ngexesha
UBetty Brown, umnini wangoku weGoldberry, uzikhumbula ngokucacileyo iiMcIlvanneys ezimbini. “Le ndawo ihleli kusapho lwam ukusukela ngo-1958 kwaye uHugh noWillie kunye nomntakwabo uNeil babehlala apha. Kwaye nasemva kokuba befumene udumo kunye nempumelelo bahlala bencamathele kwidolophu yabo. UHugh wayengumhlobo omkhulu katata wam
Uloyiso lwaseMelbourne luphindwe kabini ngasemva ukuze luzuze umdlalo obalulekileyo we-2-2 kunye neentshaba zeSydney FC kwaye babuyela phezulu kwi-W-League kushiyeke umjikelo omnye. USam Kerr ongenakuthintelwa uba lixesha lonke ekhokela amanqaku kwi-W-League Funda ngokugqithisileyo Umhlaseli obalaseleyo weNkanyezi uNatasha Dowie ulinganise nemizuzu eli-13
Kukhenketho olubambekayo lweTour de France ithamsanqa yeGeraint Thomas. UWelshman wayiphosa i-tarmac yase-French yokubhaka kwakhona njengoko iimeko zokufudumeza zizinzile kwi-peloton ngexesha lokujikeleza kwe-Nîmes, eyayihamba phambili kwelinye ipwina lika-Caleb Ewan, owayesele ephumelele iqonga eToulouse. Ukuwa kukaThomas kulo nyaka walo mdyarho weza njengoko
I-Olimpiki ezingama-2020: Isimo sezulu saseMelika kwitafile ephezulu yeemedali nge-GB kunye ne-Australia yesihlanu
Ukuba iiOlimpiki zaseTokyo zivulelekile namhlanje, iUnited States ibizakubeka phambili ukubalwa kweembasa kunye nokubalwa kweembasa zegolide. Esi sisibhengezo esikhutshwe ngoLwesibini yiGracenote Sports, enikezela ngohlalutyo lwezibalo kubadlali bezemidlalo kwihlabathi liphela. USimon Gleave, intloko yohlalutyo kwezemidlalo eGracenote, uthi imodeli yakhe i-United States iphumelele
I-Ireland ibifanele ukuba ibeke ixesha eliqhutywa lilanga elivulekileyo elangeni, hayi umthunzi wesiNgesi kwiNkosi
emazantsi etafile ye-Broncos ‘i-32-12 iphumelele kwi-top-topping Saints isenokubonakala ngathi yothukile kwabo bangazilandeli izinto ngokusondeleyo, kodwa kubantu abangama-2,087 ngaphakathi kwi-Ealing Trailfinders yayiyintoni na kodwa. Ukuqhubeka nesiqingatha sokuqala esine-14-6, i-Broncos ibambekile xa abaNgcwele- kwaye ngokukodwa umva-umva-uDanny Richardson – waqala ukuqaqanjelwa emva kwesiqingatha
UBrexit ubalaselisa izahlulo zaseIreland. Kodwa ezemidlalo zibonisa indlela esinokumanyana ngayo
Ngeli xesha, utamkhulu ka-Lowry uEmily Scanlon unikele eyona ye-Irish kuzo zonke ii-anecdotes eziphathelele kwisondlo sezemidlalo kwisikhululo se-RTÉ sase-Ireland. “Ndikhumbula ukuba bendicinga ngaye ngelixa umama ebesebenza,” utshilo. “Ndandinayo ibhokisi yebhantshi ekoneni ecaleni komgangatho, kwaye xa ndisiya kumgca weengubo ndimbeka kuwo, kwaye